FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA BULLENBEISSER DOG SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny alika Bullenbeisser Dog sy sary
Ny alika Bullenbeisser lany tamingana
Miaraka amin'ny loha lehibe, tratra fisaka, ary bika malalaka eo alohany, ireo alika ireo dia nitovy tamin'ny an'ny Boxer, Pit Bull, ary Mastiff ankehitriny. Ilay Bullenbeisser dia nanana sofina manify sy lava, takolaka lehibe sy hozatra, ary matetika dia misy takotra hoditra fanampiny, indrindra ny amin'ny vozony. Ny palitaon'izy ireo fohy dia mety ho loko maro isan-karazany manomboka amin'ny volontsôkôlà fotsy, na inona na inona aloky ny volontsôkôlà, ka hatramin'ny mainty lalina.
Mitovy amin'ny amboa mpiambina , ny Bullenbeisser dia tena nahatoky tamin'ny tompony sy manan-tsaina satria nanaraka ny baikony koa izy ireo mihaza . Ireo karazana natanjaka indrindra dia mety ho faritany bebe kokoa satria nampianarina hiaro ny tranon'ny tompony izy ireo. Tahaka ny karazana mpampijaly hafa, nahafinaritra izy ireo, nazoto ary nazoto sitraka.
Hahavony: 15 - 28 santimetatra (38 - 71 cm)
Lanja: 40 - 100 lbs (18 - 45 kg)
Noho ny tongotr'izy ireo manify sy hozatra, ny Bullenbeisser dia mety efa niaina olana teo amin'ny valahana na tamin'ny lohalika toa ny dysplasia na ny aretin'ny tiroid. Ny olana ara-pahasalamany dia nitovy tamin'ny karazana mpampijaly hafa toa ny Pit Bulls , mpanao ady totohondry , na Mastiff .
Mitovy amin'ny amboa mpiambina , mailo hatrany ny Bullenbeisser ary niambina loza. Nahafinaritra azy ireo ny toerana malalaka hijerena sy mihaza . Ireo alika ireo dia matetika hita teny ivelany na nanisy fiheverana ny manodidina azy ireo, na tamin'ny fanenjehana niaraka tamin'ny tompony. Nahavita tsara tamin'ny faritra malalaka izy ireo ary tsy nifangaro tsara tao amin'ny trano kely, indrindra fa tsy nisy toerana ivelany.
Mitovy amin'ny Boxer, ireto alika ireto dia mila fanatanjahan-tena sy efitrano malalaka. Koa satria zatra nihaza sy niambina izy ireo dia nahatsapa ho mahazo aina indrindra rehefa manana asa an-tanana. Marani-tsaina izy ireo ary takiana Training ary fanazaran-tena amin'ny fonosana isan'andro.
amerikana staffordshire terrier australian omby omby mifangaro
Mitovy amin'ny karazana mpampijaly hafa, ny Bullenbeisser dia nanana palitao fohy izay tsy mila namboarina indraindray. Tsy nitaky fotoana mahazatra izy ireo nandro mahazatra.
Ny Bullenbeisser dia nanomboka tamin'ny taona 370 taorian'i JK raha vao niresaka momba ny fifindra-monina ny Asyriana avy any Azia mankany Eropa satria mila alika mihaza sy mpiady be dia be ny mpiara-miasa aminy mba hahatafitana velona. Mitovy amin'ny Karazan-mololo karazany, ny Bullenbeisser dia teratany Alemana ary mahazatra manerana ny Empira Romanina Masina. Satria ity karazany ity dia lany tamingana , tsy dia fantatra loatra ny tena niandohan'io karazany io. Fantatsika anefa fa ity karazany ity dia fantatra ho ampahany amin'ny rafitra politika ao anatin'izany ny Fanjakana Romanina Masina, ary ireo tanàna hafa fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Belzika, Netherlands, France, Alemana, Luxembourg, ary ny Czech Republic. Tamin'ny voalohany, ny Bullenbeisser dia nampidirina ho karazana Mastiff nandritra ny faran'ny vanim-potoana romana na ny vanim-potoana Medieval ary fantatra amin'ny anarana hoe German Mastiff. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova ny anarana ho an'ny Bullenbeisser miaraka amin'ireo fiompiana samihafa manodidina ilay faritra. Nandritra io fotoana io dia nampiasaina ho fiarovana i Mastiff any Alemana mandritra ny ady. Nofatoran'ny tompony tany ivelan'ny tranony izy ireo satria niantso azy ireo ho biby goavambe ny olona ary tsy sahy niditra. Rehefa nandeha ny fotoana dia niova ireo fomba fijery ireo ary nanjary nanjary kamo ny karazana alika na dia miteraka karazana hafa aza ny tompony ary nanomboka nampiasa azy ireo ho alika mpihaza ireo tompona fa tsy alika mpiambina. Hihaza lalao lehibe toy ny bera, amboadia ary lambo izy ireo. Ilay Bullenbeisser dia haingana nanenjika haza lambo ary matanjaka mba handresy ny fihazana. Tamin'ny alàlan'ny fihazana sy fanatanjahan-tena mitohy, ny Bullenbeisser dia niseho ho mahia kokoa tamin'ny farany, miaraka amin'ny fihetsika ara-panatanjahan-tena kokoa ary ny hozatra tsy dia lehibe loatra.
Mba hamoronana Bullenbeisser, alemà dia hiteraka ny Mastiff miaraka amin'ny alikany manokana hamoronana ny Boar Hound izay fantatra amin'ny fihaza lambo dia. Ity karazana alika miampita ity dia fantatra koa amin'ny hoe Deutsche Dogge, Doggen, na fantatra kokoa amin'ny hoe the Great Dane . Betsaka no mino fa ny Alemanina dia nahavita namorona an'io karazana malaza io tamin'ny fampifangaroana ny Mastiff-ny sy ny Wolfhound Irlandey . Rehefa nanjary nifangaro tamina atletisma maro kokoa ireto alika ireto dia teraka ny Bullenbeisser. Ilay Bullenbeisser dia fantatra amin'ny anarana hoe Barenbeiszer na Bullenbijter. Ny anaran'ity alika ity dia nadika ho Bull Biter na Bear Biter.
Ny Bullenbeisser dia nalaza tamin'ny alika mpiady ho an'ny Empira Romanina Masina. Ny tantsaha dia manana kennels amin'ity karazany ity ho an'ny fambolena toy ny fisamborana biby fiompy sy fihazana. Satria malaza be ny alika manerana ny faritra, dia nanjary tsy dia lehibe intsony ilay karazany ary nanjary teo an-toerana ho an'ny tanàna tsirairay. Izany dia niteraka karazana Bullenbeisser maro isan-karazany. Ohatra, ny tany izay nantsoina taloha hoe Duchy of Brabant (ankehitriny sy Netherlands ankehitriny Belzika) dia manana ny karazany alika antsoina hoe Brabanter. Ny teôria dia io fiakarana io dia avy amin'ny fiompiana Bullenbeisser English Bulldogs satria ny Brabant dia kely kokoa noho ny karazany tany am-boalohany Bullenbeisser. Ny karazana Brabanter dia nalaza noho ny tantsambo niaraka tamin'ny dian'izy ireo hitady tany vaovao. Nolazaina fa ilay Brabant dia tao amin'ilay sambo iray ihany izay niondrana an-tsambo voalohany tany Cape Town any Afrika atsimo tamin'ny taona 1652 niaraka tamin'i Jan Van Riebeeck sy ireo tantsambo holandey hafa izay niafara tamin'ny fiompiana Brabanter niaraka tamin'ny alika hafa tany Cape Town mba hamorona karazany vaovao. Misy milaza fa izany dia nitarika ny famoronana ny Boerboel miteraka ary koa ny Rhodesian Ridgeback miteraka na dia tsy mbola voamarina aza izany.
Rehefa nihena ny haben'ny Empira Romanina Masina dia nanjary lafo vidy kokoa ny Bullenbeisser ary tsy dia nisy olona afaka nanefa azy ireo. Nandritra io fotoana io koa dia nanjary lehibe kokoa ny tanàna ary nihena ny ambanivohitra. Ity fitambarana ity dia niteraka fitakiana vitsy kokoa noho ny alika fihazana, namela maro an'isa ho an'ny karazany lany tamingana . Ny Bullenbeisser koa dia nanjary kely kokoa noho ny zava-misy fa vitsy ny olona afaka manome sakafo alika lehibe. Rehefa nitombo ny tanàna dia nitombo ny filan'ny alika mpiambina ka nahatonga ny olona hividy ny Bullenbeisser hiambina ny tranony. Satria ny Brabanter dia efa kinova kely kokoa an'ny Bullenbeisser, dia nanjary nalaza izy ireo ary farany betsaka noho ny karazany tany am-boalohany Bullenbeisser.
Amin'io fotoana io dia afaka nivarotra mora tamin'ny firenena maro i Alemana, ka nahatonga alika maro kokoa ho entina any amin'ny firenena. Ny English Bulldog dia nalaza be tamin'izany fotoana izany satria nitovy tanjona tamin'ny Bullenbeisser saingy kely kokoa, matanjaka ary nanompo tamin'ny ady. Ny Bulldog anglisy dia nitovy tamin'ny maoderina American Bulldog ary koa tonga tamin'ny loko maro kokoa noho izy be be sy be hozatra kokoa noho ny Bullenbeisser. Ireo toetra ireo dia nahatonga ny Bulldog anglisy ho tsara kokoa hiteraka ny Bullenbeisser noho ny alika hafa tamin'izany. Raha ny alika lehibe izay niterahana an'i Bullenbeisser dia ny Bulldog anglisy, ny Bullenbeisser koa dia nompana tamin'ny English White Terrier , Bull Terrier , ary ny Staffordshire Bull Terrier . Rehefa nanomboka nilalao ny karazany maro hafa, dia natahorana ho lany tamingana ilay Bullenbeisser tany am-boalohany.
Raha nanjary nalaza tamin'ny taona 1800 ny seho alika, dia nisy vondrona fampisehoana alika vitsivitsy naniry ny hamelona ilay Bullenbeisser very ankehitriny ary hanao ny karazany ho karazana namboarina. Tamin'ny fiezahan'izy ireo hamorona ny Bullenbeisser tany am-boalohany hiverina, dia namorona ny mpanao ady totohondry fa tsy izany. Ity karazana ity dia natomboka tany Munich, Alemana ary azo inoana fa ny antsasaky ny anglisy Bulldog sy ny antsasaky Bullenbeisser. Nankasitrahan'ny besinimaro ireo fiasa nomen'ny Bullenbeisser an'ity karazana Boxer vaovao ity ary vetivety dia tonga teo amin'ny ampahefatry ny Bulldog Anglisy ny Bullenbeisser ary Bullenbeisser maro an'isa. Nalaza be ny Boxer ka tamin'ny faran'ny Ady lehibe II dia nosoloiny tanteraka ny Bullenbeisser.
Betsaka no mino fa ny American Pit Bull Terrier dia taranaky ny Bullenbeisser na dia nofoanana aza izany teôria izany satria tsy nisy porofo manohana an'io hevitra io.
Ireo karazana maoderina izay heverina fa misy ifandraisany amin'ny Bullenbeisser tany am-boalohany dia ahitana ny Bull Terrier , American Pit Bull Terrier , ary ny American Staffordshire Terrier . Ireo karazana maoderina izay voalaza fa taranaky ny Bullenbeisser dia ahitana ny Great Dane , mpanao ady totohondry , Rhodesian Ridgeback , ary ny Boerboel . Alika maoderina izay mitovy amin'ny Bullenbeisser dia ahitana ny Dogo Arzantina ary ny Alano Espanol (Bulldog Espaniola) .
laboratoara mainty mavo laboratoara Mix
Boxer Club e.v. Sitz Munchen (klioba boxer alemà)
pyrenees lehibe sy fifangaroan'ny mpiandry ondry anatôlianina
Mpiandry ondry australianina retriever volamena mifangaro alika kely